Depiote miisa 73 : Noroahin’ny mpiasan’ny fanalamanga -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote miisa 73 : Noroahin’ny mpiasan’ny fanalamanga
19/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Zatra ny lalan-dririnina loatra amin’ny fanakorontanana ny asan’olona ireto depiote milaza fa hanova zavatra eto amin’ny firenena. Diso lalana anefa izy ireo raha nandeha tany amin’ny orinasa Fanalamaga Moramanga ny alakamisy teo, nikasa ny hamoaka an-keriny ireo mpiasa tao amin’ity orinasa ity. Teny maharary, fandroahana mantsy no nitsena azy ireo tao amin’ity orinasa ity. Teto dia tsy ny tompon’andraikitry ny orinasa intsony no nanakana azy ireo, fa ireo mpiasa mihitsy. Natao avokoa ny fomba fitenenana nentina namendrofendroana ireo mpiasa fa tsy nety resy lahatra ireto mpiasan’ny orinasa Fanalamanga ireto. Ny tena nahatezitra ireo mpiasa dia ny fanambaran’ny solombavambahoaka voafidy tany amin’ny faritra Atsinanana, fa tokony hosoloina ny tompon’andraikitra voalohan’ny orinasa satria tsy mahavita azy. Fomba efa fanao nandritra ny nandravana ireo mpiasa teny anivon’ny minisitera mantsy ny hoe” rehefa tonga ny minisitra vaovao izay vao miverina miasa ianareo mpiasam-panjakana”. Tsy nahomby anefa io fomba ratsy io tamin’ity indray mitoraka ity, fa nifototra tamin’izy ireo ny famoahany ireo mpiasa tao amin’ity orinasa ity. Ireo depiote indray mantsy no navoakan’ny mpiasa raha toa ka efa zatra namoaka ireny mpiasa ireny hatramin’izay.
Fahafaham-baraka araka izany no azon’ireto depiote miana-kendry ireto tany Moramanga io andron’ny alakamisy io. Tsapan’izy ireo mpiasa mantsy fa ny hanimba ny asan’izy ireo no tanjon’ireto depiote ireto. Takatr’izy ireo ihany koa fa ataon’ireto depiote ireto fitaovana handrombahana seza amin’ny fomba moramora izy ireo, ka izay no nandraisany fanapahan-kevitra entitra tamin’ny fandroahana ireto mpanongam-panjakana ireto nivoaka ny faritry ny orinasa niasany. Nangatsiatsiaka araka izany izy ireo nivoaka ny faritry ny Fanalamanga. Raha tsiahivina, dia efa ela ireto mpanao politika ireto no nikasa ny hanakorontana ity orinasa Fanalamanga ity. Niteraka savorovoro tamin’ireo mpiasa, sy mponina tao an-toerana anefa ny fahenoana izany, efa niandry azy ireo ireo mpiasa hatramin’ny nahenoan’izy ireo fa ho avy any an-toerana ireto depiote ireto. Nandray ny andraikiny tamin’ny fandaminana ny raharaha anefa ireo olobe tao an-tanàna, ary efa nanao fanambarana fa tsy eken’izy ireo ny fanakorontanana ity orinasa ity. Tsy nihaino izany anefa ireto depiote noho ny fitiavan-tseza tafahoatra ka dia nisisika, sy nanandrana naka ireo mpiasa ihany. Niaraha-nahita izao ny vokany fa fandroahana tsy misy fepetra ireto olona izay lazaina fa hendry sy manan-kaja eto amin’ny firenena ireto.